एक हजार दुई सय हजयात्री साउदी जाँदै - चारदिशा
काठमाण्डौं – नेपाल हज समितिले हज यात्राका लागि साउदी अरब जाने हजयात्रीको सुविधा विगतको तुलनामा गुणात्मक रूपले बढाउने तयारी भइरहेको जनाएको छ ।
समितिले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी आगामी साउन २ गतेदेखि हज यात्रामा निस्कने हजयात्रीको व्यवस्थापनका लागि आवासीय सुविधा र खानपिनको राम्रो व्यवस्था गरिएको जनाएको हो । यस वर्ष पनि नेपालबाट एक हजार दुई सय हज यात्रामा जानेछन् । हज यात्रामा दुई हजार पठाउनका लागि पहल गरिए पनि सार्थक नभएको समितिले जनाएको छ । समितिले गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र साउदी अरबस्थित नेपाली दूतावासको अथक प्रयासका बाबजुद पनि कोटा बढाउन नसकिएको समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँले बताए ।
साउन २ देखि १० गतेभित्र हजयात्री साउदी पुग्नेछन् । दैनिक १५० का दरले एयर अरेबियाको जहाजबाट हजयात्री लगिनेछ । साउदीमा ४२ दिनको मुख्य हज यात्रा सकेपछि उनीहरू स्वदेश फर्कने बताइएको छ ।
थप एक हजार कोटा माग गरिएकोमा साउदी सरकारले पाँच सय थप्ने मौखिक आश्वासन दिएको भए पनि त्यो पूरा हुन नसकेको भन्दै अध्यक्ष मियाँले हजयात्रीको कोटा बढाउनका लागि पहल गरिदिन सरकारसमक्ष आग्रह गरे । समितिका अनुसार नेपालमा करिब १२ लाख मुस्लिम समुदाय रहेको पुरानो आँकडा रहे पनि अहिले त्यो संख्या अहिले झन्डै १५ लाखको हाराहारी पुगेको छ ।
प्रतिहजयात्री करिब रु. दुई लाख ३० हजार खर्च लाग्ने बताइन्छ । यो रकम हजयात्रामा जानेले नै व्यहोर्छन् । समितिले रु. १० देखि १५ हजार हरेक हजीलाई फिर्ता गर्ने गरेको थियो, यो वर्ष रकम बढेकाले फर्काउन समस्या हुने समितिको भनाइ छ ।
विगतभन्दा कम रकममा हज गराउन लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको भए पनि साउदी सरकारले नै हजयात्रीको खर्च बढाएकाले समस्या भएको समितिका अध्यक्ष मियाँले बताए । उनले हजयात्रीको सहज व्यवस्थापनका लागि अनुदान रकम उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग पनि गरे ।
समितिका अनुसार यस वर्ष साउदी रियल बढेकाले प्रतिहाजीको कुल खर्चमा झन्डै रु पाँच हजारले वृद्धि भएको छ । साउदी सरकारलाई प्रतिहाजी स्थानीय यातायात खर्च यसपटक रु. १५ हजार १८० का दरले बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ ।
अध्यक्ष मियाँले हज समितिबारे केही व्यक्तिले अनर्गल प्रचारबाजी गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै संस्थाभित्र त्यस्तो कुनै गतिविधि नभएको र हज समिति आफनो लक्ष्यमा कटिबद्ध भएर लागिपर्ने बताए । हाजीको टिकटलगायत व्यवस्थापनमा समितिले आर्थिक अनियमितता गरेको भनी समाचार आएको थियो ।
तनहुँमा नदीले बगाएर एक बेपत्ता, एकको उद्धार
विमानस्थलमा संकटकालीन अभ्यासका लागि आधा घन्टा सेवा बन्द